WAXYAABAHA: XADIISKA DIBADDA DHALINYARADA MADAXWEYNAHA EE NOOCA KA QAADATAY NABADDAADA - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS »DAAWEYNTA: XADIISKA DHAMAADKA MADAXWEYNE KU XIGEEN EE KA QAADAN KARTAA NOLOSHA
XUSUUS: 25 DIB U DHASHAY MACMALINTA DHALINYARADA SI LAGU QAATO
XAALADAHA DEGDEGA AH EE BULSHADA DHALINYARADA
Magaalooyinka casriga ahi waxay noqon karaan kuwo halis ah, mararka qaarkoodna ma dareemayno ammaan ah magaalooyinka waaweyn. Xaaladaha kala duwan ayaa dhici kara waana inaad diyaar u noqotaa xitaa xaaladaha khatarta ah. Iyadoo aan loo eegin xaalada, waxaa jira had iyo jeer ugu yaraan hal ama laba hack-ka badbaadada iyo xirfadaha aad u baahan tahay hadda. Waa inaad taqaanaa sida loo xalliyo xaaladaha adag adoo isticmaalaya waxaad leedahay. Dabcan, marmarka qaarkood waa inaad hagaajisaa, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad ogaato talooyinka muhiimka ah ee joogtada ah. Fiiri fiidiyowga si aad u ogaatid sida looga baxsado haddii gacmahaagu xiran yihiin, farsamooyinka difaaca isboortiga ah in gabar kasta ay ogaadaan, sida loo noolaado dab. Waxaan leenahay xalal aan caadi aheyn dhibaatooyinka caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn.
Guryaha oo keligood ah habeenkii waa qatar. Taasi waa sababta aad u baahan tahay inaad ogaatid tallaabooyinka isdabajooga isdifaaca si aad u difaacdo naftaada xaalad kasta. Had iyo jeer xasuuso meelo nugul sida sanka, indhaha, cunaha, gumaarka. Sidaas darteed haddii lagu soo weeraro, waa inaad ku garaacdaa weerarka gumaarka, sababtoo ah taasi waxay curyaan ahaan u curyaanaysaa waxaadna haysataa waqti kugu filan oo aad ku baxsato. Dhibaatada timirta waxay sababtaa dhaawac xagga sanka ama cunaha oo waa inaad udhowdahay weerarka si aad u gaarsiiso dhaawaca ugu badan ee suurtogalka ah. Si aad uga baxsatid xayawaan qabow si dhakhso ah madaxaaga u riix si aad u garaacdo sanka ama sanka. Fiiri fiidiyowgeena si taxadar leh markaan soo ururinnay tallaabooyinka ugu waxtarka badan ee looga hortagayo weerarka.
Baro jilabyo kale oo muhiim ah sida looga baxsado haddii gacmahaagu xiran yihiin. Waxaad isticmaali kartaa xargaha iyo timaha. Waxaad baran doontaa sida loo isticmaalo tampon si loo bogsado nabarrada loona joojiyo dhiigbaxa.
00: 09 waxay ka cararayaan nafaha
01h50 Tilmaamaha Difaaca Iskujira
07: 25 Lifehacks Nafaqo
08: 40 Sida loo badbaadiyo dab
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=5J2lq917RMM
Champions League: Iker Casillas oo ka tirsan Fabien Barthez (2012) - VIDEO
Poupy la go pakgne waxay u dabbaaldegtaa champagne qoyska - halkan waa video